RW Rooble oo Wasiirada DG Koofur Galbeed & Odoyaasha ka codsaday la shaqeynta Guddiga Doorashada 20/21. – Banaadir Times
By banaadir 23rd November 2020 154 No comment
Ra’iisul Wasaaraha XFS Maxamed Xuseen Rooble oo ku sugan Magaalada Baydhabo ayaa kulamo la qaatay Wasiirada maamulkaas, mas’uuliyiin kala duwan & Odoyaasha dhaqanka Koofur Galbeed.
Rooble ayaa xubnaha uu la kulmay kala hadlay doorka ay ka qaadan karaan doorashada Soomaaliya 20/21, maadaama Odoyaasha ay soo dooranayaan Ergada dooraneysa Xildhibannada Golaha Shacabka BFS.
Maxamed Xuseen Rooble Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa Wasiirada Koofur Galbeed ka codsaday in ay la shaqeeyaan Guddiga Doorashada, isla markaana ay u fududeeyaan waxyaabaha ay u baahdaan si aysan hakad u gelin howlaha Doorasho 20/21.
Madaxweynaha DG Koofur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo goobjoog ka ahaa fadhiga Wasiiradiisa iyo Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ee uu ku taageero dalbaday.
Wasiirka Koowaad ee Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa inta uu ku sugan yahay Magaalada Baydhabo sii wadaya kulamada xooggooda uu diiradda ku saaraya Doorashada Dalka 20/21.
Puntland oo Farmaajo ugu baaqday in uu kusoo laabto shirka Afisiyooni
By banaadir 23rd November 2020